किन आउछ अनुहारमा कालो पोतो ? यसरी पाउनुहोस् सधैका लागि छुटकारा – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/किन आउछ अनुहारमा कालो पोतो ? यसरी पाउनुहोस् सधैका लागि छुटकारा
काठमाडौँ । चिन्ता लिइरहने, पानी कम पिउने, बढी घाममा रहने, चर्को बत्तीको प्रकाश छालामा परिरहने, जथाभावीरुपमा फुटपाथे सौन्दर्य प्रशोधनका सामग्री प्रयोग गर्नेहरुमा कालोपोतो आउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।
महिला हुन् वा पुरुष जोसुकैलाई पनि कालो पोतो अर्थात् चाया आउन सक्छ । पुरुषले यसलाई खासै वास्ता नगरे पनि महिलालाई यो कुराले बढी नै चिन्तित तुल्याएको हुन्छ।
तर अब यसरी चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रायः हरेक अस्पतालमा स्किन उपचारको छुट्टै युनिट खुलेको छ भने छालाको मात्रै उपचार गर्ने क्लिनिकहरु पनि सहर–बजारमा देखिएका छन्। अझ भन्ने हो भने विशेष ब्युटिपार्लरहरुमा समेत कालो पोतो हटाई अनुहारको सौन्दर्य बढाउने गरिन्छ।
ख्यातिप्राप्त अस्पतालमा चर्मरोगकै विशेषज्ञ डाक्टर र ब्युटिपार्लरमा तालिमप्राप्त एवम् अनुभवी ब्युटिसियनहरुद्वारा सेवा प्रदान गरिने भएकाले हानिरहित उपचार सेवा पाउन सकिन्छ । तर जथाभावी खुलेका क्लिनिक एवम् ब्युटी पार्लरमा उपचार गराउँदा छाला बिग्रन सक्ने भएकाले यसमा सतर्कता भने अपनाउनै पर्ने हुन्छ ।
बजारमा पाइने चाया हटाउन प्रयोग गरिने केमिकलयुक्त क्रिम आफूखुशी प्रयोग गर्नुहुँदैन । यसले एलर्जी भई अर्को समस्या ल्याउन सक्ने भएकाले प्रयोग गर्नुपूर्व कतै छालामा लगाएर परीक्षण गर्नुपर्छ।
छालामा मेलामाइन भन्ने तत्त्व हुन्छ । यसले छालालाई प्रकृतिक रंग दिने काम गर्छ । यदि यस तत्त्वमा गडबडी भयो भने छालामा हुनुपर्ने रंग नभई अर्कै देखिन्छ । विभिन्न थेग्लाथेग्ली, टाटाटाटी पनि देखिन सक्छ।
त्यसैले मेलामाइनको गडबडीले पनि कालो पोतो आएको जस्तो देखिन सक्छ । त्यस्तै महिनावारी बन्द हुने समयमा हर्मोनको गडबडीले चाया आउन सक्छ । गर्भाशय, मूत्रनली, कलेजोको स्वास्थ्य समस्या भएमा र अलि लामो समय बिरामी भएमा पनि अनुहारमा कालो पोतो देखिन सक्छ ।
चिन्ता लिइरहने, पानी कम पिउने, बढी घाममा रहने, चर्को बत्तीको प्रकाश छालामा परिरहने, जथाभावीरुपमा फुटपाथे सौन्दर्य प्रशोधनका सामग्री प्रयोग गर्नेहरुमा कालोपोतो आउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ ।
यसैगरी छालाको सरसफाइमा ध्यान नदिने, ब्लिच–ह्वाइट्निङ क्रिम बढी प्रयोग गर्ने, नकारात्मक सोचाइ गरिरहनेहरुमा छालाको समस्या हुन सक्ने हुँदा कालोपोतो आउन सक्छ । साथै कुपोषण भएका, पेट सफा नहुने अर्थात् कब्जियत भइरहने, छाला अति नै सुख्खा हुने वा अति नै तैलीय हुनेहरुमा पनि कालो पोतो देखिन देखिन सक्छ ।
चाया अर्थात् कालोपोतो हटाउन मात्र नभएर पूरै अनुहार सफा बनाउन विभिन्न घरेलु फेसप्याकहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता फेसप्याकले दाग, खटिरा, फोहोर र मृतछालासमेत हटाउन मद्दत मिल्छ ।
जुनसुकै व्यक्तिले जुनसुकै समयमा पनि फेसप्याक लगाउन सक्छन् । तर अनुहारमा घाउ वा जटिलता भएमा विशेषज्ञ डाक्टरबाट उपचार गराउनुपर्छ ।
फेसप्याक धेरै किसिमले बनाउन सकिन्छ । जौको पीठो, मुगको दाल, अण्डाको सेतो भाग र दूध मिलाएर बनाएको फेसप्याकले हानिरहित अनुहार सफा बनाउन सकिन्छ । छालाको बाहिरी भागमा रहेको कालोपोतो हटाउन यस किसिमको फेसप्याक उपयोगी हुन्छ ।
यस्तो फेसप्याक अनुहारमा लगाएको १५ मिनेटपछि दूधले भिजाउँदै मसाज गर्नुपर्छ । त्यसपछि पानीले पखाल्नुपर्छ । यस बेला कुनै पनि साबुनको प्रयोग गर्नुहुँदैन । बरु नियमित म्वाइश्चराइजरको प्रयोग गरेमा छाला सुन्दर देखिनुका साथै स्वस्थ हुन्छ ।
त्यस्तै गाजर, आलु र काँक्रो मसिनो गरी कोरेसोमा कोरेर बटर मिसाएमा राम्रो फेसप्याक बन्छ । मुसुरोको दालको पीठो दूधमा मिसाएर पनि फेसप्याक बनाउन सकिन्छ ।
फेसप्याक जसरी बनाए पनि माथि बताएबमोजिम अनुहारमा प्रयोग गरी पखाल्नुपर्छ । यस किसिमका फेसप्याकले छालाको बाहिरी सतहमा भएका फोहोर पदार्थ हटाई अनुहारको सुन्दरता बढाउने हुन्छ ।
मुख्य कुरा चाया हटाउन वा यसबाट बच्न सूर्यको किरणबाट बच्नुपर्छ । घाममा निस्कँदा सन स्क्रिन लोसन लगाउनुपर्छ । छालाको प्रकृतिअनुसारको स्याहार गर्नुपर्छ ।
कुनै जटिल समस्या भएमा छालाको डाक्टरबाट उपचार गराउनुपर्छ । त्यसै गरी ताजा तरकारी, फलफूल, सागसब्जी सन्तुलित रुपमा खाने गर्नुपर्छ । मेकअप सामग्रीमा पाउडर–ब्लसरको सामग्री प्रयोग नगर्नु राम्रो हुन्छ । अनुभवी ब्युटिसियनबाट मात्र सौन्दर्य सेवा लिने गर्नुपर्छ ।
सफा अनुहार स्वस्थताको प्रतीक हो । यदि अनुहारमा कालो पोतो अर्थात् चाया आएको छ भने कुनै अन्य रोगले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ । त्यसैले अन्य रोगको उपचारपछि बिस्तारै चाया पनि हराएर जान्छ। विशेष गरी गोरो छालामा चाया स्पष्ट देखिन्छ तर कालो छालामा त्यति देखिँदैन।
जान्नुहोस् : शारीरिक सुखप्राप्ति गर्दा केटीको इच्छा गोप्य सामानमा भन्दा पनि यी कुराहरुमा बढी हुन्छ